Hot Archives - Page9of9- Chelmo News Portal
Home›Category: "Hot" (Page 9)
ငယ်ငယ်ကဆို မြဝတီမှာ ကိုရီးယားကားပြမယ့်အချိန်ကို ထိုင်စောင့်ခဲ့ဖူးပါသလား? အချိန်တွေကြာသွားပေမယ့် ပြန်ကြည့်တိုင်းရိုးမသွားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေရှိကြပါတယ်။ ပြန်မကြည့်ဖြစ်ရင်တောင် Posterလေးမြင်တာနဲ့ ဘာကားဆိုတာသိပြီး ဒီကားကြည့်ပြီး ဘယ်လိုငိုခဲ့ရတာဆိုတဲ့ Feeling မျိုးကိုရစေပါတယ်။ အဲ့ကားတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ (၁) Autumn In My Heart ဆောင်းဦးရွက်ကြွေ ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ ...
ယခုတစ်ပတ်ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ် (၄) အပြီးမှာ ဘိုင်ယန်၊ ဂျူဗင်တပ်စ်နဲ့ PSG တို့ကတော့ ယခုနှစ်ချန်ပီယံလိဂ်ရဲ့ ရှုံးထွက်အဆင့်ကို ပထမဆုံး တက်လှမ်းနိုင်သူတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ၃သင်းသာ တက်သေးတာကြောင့် ၁၆သင်းအဆင့်ကို ဆက်လက်တက်ရောက်နိုင်ဖို့ ၁၃နေရာ ကျန်သေးပြီး ဘယ်အသင်းမဆိုတက်ရောက်သွားနိုင်တဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်နေတာကြောင့် ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်တဲ့ ...
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အပန်းဖြေခရီးသွားတယ်ဆိုတာ၊ တချို့က ကမ်းခြေမှာ ထိုင်ပြီး၊ စိတ်အေးလက်အေးနဲ့ အရက်သောက်၊ ဂိမ်းဆော့ပြီးနေတာမျိုးကိုခေါ်သလို မိမိအသက်ကိုတောင်မငဲ့ကွက်ပဲ စွန့်စားခန်းဖွင့်ချင်တဲ့လူအချို့အတွက်တော့လည်း သက်စွန့်ဆံဖျား နေရာတွေကိုသွားရောက်ချင်တာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလိုလူစွန့်စားတွေအတွက် အသက်ကိုဖက်နဲ့ထုပ်ပြီး သွားရနိုင်လောက်တဲ့ ကမ္ဘာပေါ်က အန္တရာယ်အကြီးဆုံးနေရာတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဒီထဲက ခရီးစဉ်အချို့ဆိုရင် အန္တရာယ်များလွန်းလို့ ခရီးသွားတွေကို ...
Disney က ထုတ်လုပ်ပြသမယ့် Star Wars စီးရီးရဲ့ ရှိုးအသစ်ဖြစ်တဲ့ The Mandalorian ရဲ့ Disney + ကို ထုတ်လုပ်ဖို့ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာပဲ ထုတ်ဖော်လိုက်ပါပြီ။ Trailer အသစ်မှာ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ ပြကွက်၊ ရိုက်ကွက်တွေနဲ့အတူ အာကာသအတွင်း စွန့်စားခန်းတွေ ...
မိန်းကလေးတစ်ယောက်မှာ ၁ လအတွင်းမှာ စိတ်အခြေအနေက အမျိုးမျိုးကို ပြောင်နေတာနော်။ မိန်းကလေးတွေ ၁ လတာ အတွင်း စိတ်တွေပြောင်းနေတယ်ဆိုတာက ခန္ဓာကိုယ်ထဲက မိန်းကလေး ဟိုမုန်း အခြေအနေကြောင့်ပါ။ ၁ လ အတွင်း မှာ စိတ်ကလေ ၄ ကြိမ်တောင် ပြောင်းတာနေတာပါ။ ပထမ – ...
အမေကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ အရင်းနီးဆုံးသော သူငယ်ချင်းဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ စိတ်ညစ်နေရချိန်၊ ပျော်စရာကောင်းသောအချိန်တွေမှာ အမြဲအတူတူရှိနေပင်မဲ့လည်း တချိန်မှာတော့ရှိချင်မှရှိတော့မှာပါ။ ဒီတော့ နောင်တတွေ မရအောင် အမေဆီ ဖုန်းဆက်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။ ၀၁. အမေ့အတွက် အရေးကြီးဆုံးက သား(သို့) သမီးပါ။ ၀၂. ကိုယ့်အကြောင်းကို မိနစ် ၃၀ ...
Taylor Swift ကတော့ သီချင်းအသစ်ထွက်လာတိုင်းကို ပရိသတ်အားပေးမှုအပြည့်အဝ ရယူထားနိုင်တဲ့သူပါ။ အခုဆိုရင် “You Need To Calm Down” သီချင်းကို MV အနေနဲ့ထွက်ရှိလာတာတစ်ရက်တောင်မပြည့်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်း You Tube မှာတော့ Trending No 1 ဖြစ်နေပါပြီ။ ပရိသတ်တွေဝက်ဝက်ကွဲအားပေးနေတဲ့ဒီသီချင်းဟာ LGBT တွေကို ...
ချစ်သူနှစ်ဦးကြားမှာ ယုံကြည်မှုရဖို့နဲ့ စိတ်လုံခြုံမှု ခံစားရစေဖို့အတွက် ပွေ့ဖက်ခြင်းက အလှပဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံး ဆက်သွယ်မှုပါ။ ပွေ့ဖက်တဲ့အခါ တစ်ဖက်လူကို သူဟာ သင့်အတွက် အရေးပါတဲ့ သူဖြစ်ပြီး ချစ်တယ်ဆိုတာ ခံစားမိစေပါတယ်။ စက္ကန့် ၂၀ ထက်ပိုကြာတဲ့ ပွေ့ဖက်ခြင်းတွေဟာ သင့်ကို ပျော်ရွှင်စေပြီး အထီးကျန်မှု၊ အဖော်မဲ့မှု၊ ...